Softmedal - Soo Degso Software-ka Bilaashka ah, Ciyaarta Android APK
Anaconda Navigator oo wata dhammaan aaladaha lagama maarmaanka u ah kuwa doonaya inay horumariyaan Python-ka Windows. Qaybinta Anaconda; Waxay ka kooban tahay dhammaan qalabka wax soosaarayaasha oo kuu fududeyn doona inaad ku horumariso codsiyada barashada mashiinka ee loo yaqaan Python Qaar ka mid ah IDE-yada sayniska xogta ee yimaada...
Tifatiraha Kate waa Tifatiraha Qoraalka ee Windows. Kate waa tifaftire qoraal badan oo muuqaal ah oo ay daabacday KDE kaas oo ku shaqeyn kara dukumiintiyo badan. Soo bandhigida koodh isku laaban, muujinta jumlada, duubista erayga firfircoon, terminaalka gundhigga ah, is dhexgalka ballaadhan ee ballaadhan, iyo xoogaa taageero qoraal ah,...
Malware Hunter waa barnaamij kaa caawinaya inaad ka difaacdo fayrasyada Malware Hunter waa barnaamij antivirus ah oo aad isticmaali karto hadii aad rabto inaad ka difaacdo kombiyuutarkaaga furin iyo fayrasyo ​​madax adag Malware Hunter, oo ay soo saartay shirkada Glarysoft, asal ahaan waa barnaamij amaan ah oo loogu tala galay inuu adiga...
Habka ugu fudud ee loo fuliyo tijaabooyinka amniga ee mashaariicdaada. Metasploit waa softiweer amni oo bixiya macluumaad ku saabsan dayacanka, ka caawiya baaritaanka gelitaanka iyo horumarinta saxiixa IDS. Metasploit waxay kaa caawineysaa inaad sameyso wax ka badan xaqiijinta nuglaanta, maareynta qiimeynta amniga, iyo inaad sare u qaado...
AVG Secure VPN waa bilaash barnaamijka VPN ee loogu talagalay Windows PC (kombiyuutar). Ku rakib AVG VPN hadda si aad u ilaaliso shabakadaada WiFi isla markaana si qarsoodi ah u baartid. AVG Secure VPN ama AVG VPN waa barnaamij bilaash ah oo VPN ah oo loogu talagalay Windows PC, kombiyuutarka Mac, telefoonka Android iyo isticmaalayaasha...
Codsiga Qaamuuska Qaamuuska, waxaad ku raadin kartaa macluumaadka aad raadineyso ilaha tayada leh. Codsiga Qaamuuska Xariifka ah waxaa loo daabacay inuu yahay barnaamij bilaash ah oo aad isticmaali karto intaad ku guda jirto sameynta macluumaad kasta ama baaritaanka xogta kombiyuutaradaada oo muujineysa natiijooyinka macluumaadka laga...
Haddii aad rabto inaad ku aragto xiddigaha, meerayaasha, nebulae iyo xitaa habka caanaha ee cirka ee goobtaada adigoon teleskope lahayn, Stellarium ayaa waxyaabaha aan la garanayn ee bannaan ka keenaya shaashadda kombiyuutarkaaga ee 3D. Stellarium wuxuu kombiyuutarkaaga ugu beddelayaa meeraha meeraha si bilaash ah. Waxaad ku mari kartaa...
Waad ku goyn kartaa qaabab iyo qoraallo leh Easy Cut Studio Easy Cut Studio waa barnaamij qaab-dhismeed u oggolaanaya dadka isticmaala inay jaraan wixii far ah ee loo yaqaan TrueType ama OpenType font, la gooyo SVG ama PDF. Easy Cut Studio kaliya uma ogolaanayo dadka isticmaala inay jaraan noocyada iyo qaababka dukumiintiyada, laakiin...
DWG FastView waa barnaamij loogu talagalay adiga inaad si fudud u daawato shaqooyinka AutoCAD ee kombiyuutarada ku saleysan Windows. DWG FastView, DWG iyo DXF iwm ee Windows. Waa barnaamij kuu oggolaanaya inaad ku daawato faylasha leh kordhin. Barnaamijka loo yaqaan AutoCAD waa mid ka mid ah barnaamijyada loo isticmaali karo ku dhowaad...
Ku calaamadee sawirradaada luminta tayada eber. WonderFox Photo Watermark waa barnaamij aad u isticmaali karto in aad ku darto calaamado sawirro ah kombiyuutarkaaga Windows. Waxaan ka hadlayaa barnaamij weyn oo bixiya in ka badan 150 qalab calaamadeyn bilaash ah, taageerid muuqaal iyo qoraalo qoraaleed labadaba, qaabab diyaarsan, qalab...
Adiga oo adeegsanaya Hider Folder Hise, waxaad ku qarin kartaa feylashaada iyo faylalkaaga bilaash, adiga oo ka hor istaagaya kuwa kale inay galaan xogtaada gaarka ah. Hider Folder Hise waa feylal bilaash ah iyo qalab wax lagu qariyo. Isticmaalayaasha waxay ku qarin karaan faylalka iyo faylkooda qormooyinka deegaanka ama aaladaha laga...
Live for Speed ​​waa ciyaar jilitaan jilid macquul ah oo aad ka ciyaari karto kombiyuutaradaada nidaamka qalliinka Windows. Ku noolaanshaha xawaaraha waa mid ka mid ah cayaaraha ugu caansan ee dhammaan ciyaartoyda doonaya inay kaqeyb qaataan jilitaanka tartan macquul ah ay doorbidayaan. Haddii aad rabto inaad ku raaxaysato ciyaartan...
PES 2021 Lite waa lagu ciyaari karaa kombuyuutarka! Haddii aad raadineyso ciyaar kubbadda cagta oo bilaash ah, eFootball PES 2021 Lite ayaa talo noo ah. PES 2021 Lite PC ayaa laga soo saaray kuwa rajeynaya ciyaar kubbadda cagta PES oo bilaash ah! Ciyaarta kubada cagta ee eFootball PES 2021 Lite, oo lagu keydiyo sida FIFA ee...
Notepad3 waa tifaftire aad ku qori karto lambarka qalabkaaga Windows. Notepad3, oo laga sameeyay Notepad, oo aan waligeed isbeddelin oo aan la cusbooneysiinin 20 sano ee taariikhda Windows-ka oo loogu talagalay inay adeegsadaan kuwa soo saara barnaamijyada, ayaa taageeri kara luqado badan. isla waqtigaas. Sidoo kale waa tifaftire qoraal...
Anno 1800 waxaa loo sii daayay ciyaar istiraatiijiyad ah. Anno 1800 waa nooca 2019 ee ciyaarta istiraatiijiyadeed ee horumarinta sanado badan. Anno 1800, oo ay soo saartay shirkadda Blue Byte oo ay daabacday Ubisoft, ayaa u muuqata mid ka mid ah istiraatiijiyadda ciyaaraha la soo saaray muddo dheer. Anno 1800, oo ka duwan ciyaaraha kale...
UltraEdit waa aalad xallin xirfad leh oo dooratay barnaamijyo badan oo adduunka ah, oo taageeraya daraasiin qaabab ah. UltraEdit wuu ka duwan yahay barnaamijyada kale ee tifaftiraha qoraalka leh astaamaha horumarsan, UltraEdit waa tifaftire qoraal xirfadle ah oo ku habboon luqadaha kala duwan ee barnaamijyada sida txt, hex, XML, HTML,...
Hello Deriska 2 wuxuu ku jiraa Steam! Hello Deriska 2 Alpha 1, mid ka mid ah cayayaanka ugu xun ee naxdinta leh ee kombuyuutarka, ayaa hadda loo heli karaa soo dejin bilaash ah. Hello Deriska 2 Alpha 1 waxaa loo heli karaa soo degsiin bilaash ah kahor intaan la sii deyn Hello Deriska 2. Hello Deriska, mid ka mid ah cayayaanka ugu xun ee...
Maxnote waa codsi qoraal ah oo aad ku isticmaali karto si raaxo leh nidaamka hawlgalka Windows. Maxnote waa codsi qoraal qaadasho ah oo aad ku isticmaali karto kombiyuutarkaaga Maxnote wuxuu bixiyaa ku dhowaad wax kasta oo tartamayaasheeda ay ku sameyn karaan bilaash aaggan aadka loogu tartamayo. Waxaad ku soo qori kartaa qoraal dalabka...
Muuqaalka Sawirka waa barnaamij bilaash ah oo guul leh oo tafatir sawir ah oo aad si fudud ugu sameyn karto sawir-qaadistaada maalinlaha ah. Isticmaalayaal badan uma baahna astaamaha waxqabadka ee barnaamijka sida Photoshop si ay u qabtaan hawl farsamo fudud oo caadi ah. Sababtoo ah, guud ahaan, hawlgallada maalinlaha ah ee aan ku...
Reshade waa codsi hagaajinaya pixels-ka sawirka aad weyneyso oo soo saaraya muuqaal tayo fiican leh. Reshade waa nooc ka mid ah arjiga tafatirka sawirka. Waa inaad aragtay in tayada sawir kasta oo qaraarkiisu hooseeyo hoos udhacayo markaad ukeento saamiga xallinta sare ee aad rabto. In kasta oo aad tallaabo qaadi karto sida raadinta nooc...
PDF Unlock waa codsi ay soo saartay Uconomix oo ka saareysa furaha sirta ah faylasha PDF. PDF Unlock waa barnaamij lagu furayo faylasha la duubay oo PDF ah PDF Unlock ayaa la rakibayaa waxyar ka dib markaad gujiso faylka rakibaadda isla markiiba wuxuu kuu geynayaa shaashadda guriga. Laakiin kahor intaadan gaarin heerkan, hubi in .NET...
Boodhka Cyber ​​Dust waa barnaamij fariin deg deg ah oo leh nidaam u eg Snapchat oo si toos ah tirtiri kara fariimaha Cyber ​​Dust waxay bixisaa tirtirida tooska ah ee fariimahaaga kadib mudo cayiman adoo la sheekaysanaya asxaabta ama dadka aduunka kudhaqan, waana codsi loo adeegsan karo mobilada sidookale Windows 10 kiniiniyada iyo...
DAEMON Tools Lite waa barnaamij kumbuyuutar abuuris bilaash ah oo aad si fudud ugu furi karto faylasha sawirada leh ISO, BIN, CUE kordhinta adigoo abuuraya saxanno dalwad ah. DAEMON Tools Lite waa softiweer bilaash ah oo la isku halleyn karo oo u saamaxaya dadka isticmaala inay si deg deg ah oo fudud ugu abuuraan saxannada dhijitaalka ah...
Haddii aad raadineyso maamule feyl oo xariif ah oo dhakhso leh si aad u maamusho feylashaada, waad isku dayi kartaa arjiga Maareeyaha Faylka Orion. Codsiga Maareeyaha Faylka Orion wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si fudud ugu abaabuli karto feylashaada aaladahaaga Android-ka ah.Haddii aad rabto inaad si fudud u abaabusho fiidiyowyo, sawirro,...
Google Chrome waa biraawsar internet fudud oo fudud oo caan ah. Ku rakib biraawsarka Google Chrome, si dhakhso leh oo ammaan ah u soco internetka. Google Chrome waa biraawsar internet bilaash ah oo caan ah kuna qalabaysan tikniyoolajiyadaha casriga ah ee Google. Xulashada ugu horeysa ee isticmaaleyaal badan oo doonaya inay si dhakhso...
Firefox Quantum waa biraawsar shabakadeed casri ah oo loogu talagalay dadka isticmaala kumbuyuutarka ee leh nidaamka hawlgalka Windows, waxay cuntaa xusuus yar, dhakhso ayey u shaqaysaa. Waxaan leenahay biraawsar web ka shaqeynaya si ka dhaqso badan qaabka caadiga ah ee Mozilla Firefox, oo cunaya ilaha yar isla markaana bixinaya...
Naqshadeynta loogu talagalay Android, Zombie Frontier 4 waa ciyaar caan ah oo loo yaqaan zombie first-person game. Ciyaartoydu waxay ururiyaan qalabka iyo hubka farsamada, waxay la dagaallamaan dhimashooyinka isbeddelay, waxay daawadaan zombies burbura, waxay la kulmaan dareenka runta ah. Sii deynta cusub ee taxanaha, xZombie Frontier 4,...
Adoo isticmaalaya Glary Tracks Eraser, waxaad si fudud ugu nadiifin kartaa feylasha iyo taariikhda aan loo baahnayn ee ku saabsan diskigaaga adag. Barnaamijka Glary Tracks Eraser asal ahaan waa qalab bilaash ah oo lagu tirtirayo raadadkii hore ee kumbuyuutarkaaga waxaana loo isticmaali karaa si aad u fudud. Thanks to interface-keeda...
Qalab dayactir nidaam oo bilaash ah oo kuu oggolaanaya inaad si fudud u fuliso habsami u socodka habka lagama maarmaanka ah ka dib muddo cayiman oo aad ku isticmaasho kombuyuutarkaaga. Qalabka loo yaqaan Glary Utilities waa barnaamij bilaash ah oo leh qalab badan oo awood badan oo si fudud loo isticmaali karo si loo ilaaliyo, loo...
ComboFix, waad ku nadiifin kartaa fayrasyada marka barnaamijkaaga antivirus uusan shaqeynin ComboFix waa barnaamij bilaash ah oo lagaa qaadayo viruska oo aad isticmaali karto hadii kombiyuutarkaaga ay soo weeraraan malware sida virus, trojans, rootkits, adware, spyware, malware iyo software-kaaga antivirus ma daboolayo baahiyahaaga si...
Diiwangalinta Diiwangalintu waa barnaamij aad ku baari karto diiwaanka Windows-ka, khaladaadka ku hagaajiso oo aad ku hagaajin karto. Diiwangelinta Diiwangalintu waa aalad nidaam dhammaystiran oo kuu oggolaanaysa inaad si dhakhso leh u hagaajiso wixii khalad ah ee ku jira Diiwaanka Windows-ka. Waad ku kordhin kartaa waxqabadka nidaamka...
EZ Game Booster waa barnaamij kobciye kumbuyuutar ah oo kaa caawinaya inaad sifiican u ciyaarto ciyaaraha adigoo kordhinaya waxqabadka kumbuyuutarkaaga. EZ Game Booster waa nooc ka mid ah barnaamijyada ciyaarta kobciya oo hagaajinaya khibradaada ciyaaraha adigoo xiraya howlaha aan loo baahnayn iyo hagaajinta isticmaalka ilaha...
Ku safro cirka sare kuna qarxi cadaawayaashaada diyaarad dagaal si aad naftaada u qalabeyn karto. Xullo diyaarad dagaal oo aad dareento awooda weyn ee ciidanka cirka ee Sky Combat. La ciyaar ciyaartoy dhab ah dagaalada PvP ee internetka. Hubi naqshadaha heer konsol leh faahfaahinta sida laga cabsado sida War Thunder. Ku cibro qaado...
Hotspot Shield waa barnaamij awood badan oo wakiil ah oo kuu oggolaanaya inaad internetka dhex mariso adigoon aqoonsan adigoo qarinaya aqoonsigaaga iyo marin u lahaan kara bogagga mamnuuc ka ah adigoon u baahnayn barnaamij dheeri ah. Hotspot Shield, oo ah barnaamij ku saleysan VPN, waa mid ka mid ah barnaamijyada ay adeegsadayaasha...